Nezvedu - Beijing Zohonice Runako Equipment Co., Ltd.
Kubva 2008, isu tave kungoita yehunyanzvi uye epamberi tekinoroji yemasalon, spas, makiriniki uye maitiro.
Tariro yedu yakanangana nekununura vatengi vane kumberi kurapwa kwekurapa zvakagadzirwa pamwe neyakaenzana chikamu chebasa uye rutsigiro rwebhizinesi rwakaenderera mberi rakaona timu yedu ichikurumidza kusanduka kuita vatungamiriri veindasitiri - ichimisikidza chiratidzo cheizvo zvinogona kuitika mumunda uri kuwedzera weaesthetics. Parizvino, isu tinopa yekucheka-kumucheto kurapwa tekinoroji uye bhizinesi kukura rutsigiro kune vanopfuura zviuru zviviri stockist mhiri kweChina.
Isu tinoomerera pakutangira kubva kune zvinodiwa nevatengi, ramba uchipa yakanakisa chigadzirwa kusarudzira kukurudzira mabasa, kutengesa iyo indasitiri inotungamira-kumucheto zvigadzirwa, uye kugadzira yakanyanya kukosha kune vatengi. Kugutsikana kwevatengi ibasa redu rebasa.
Chikwata chedu chine vanopfuura makumi matatu vane hunyanzvi hwetekinoroji vanosanganisira vanokwanisa mainjiniya, vashambadziri, vanachipangamazano, vadzidzisi, kuchengetwa kwevatengi, zvigadzirwa, mari, manejimendi nevashandi vehutongi. Kubudikidza neiyi netiweki yakabatana, isu tinoshongedza mabhizimusi erunako eese saizi uye hunyanzvi nekuwana kune yemhando yepamusoro uye giredhi rezvokurapa renji yezvishandiso - zvese zvakanyatso nyatsoongororwa uye kutorwa kubva kune vakanyanya kugona venyika muhunyanzvi hwemberi kwesalon yako, spa, kiriniki uye dzidzira.
Ehe, timu yedu yekutengeserana yekune dzimwe nyika inoumbwa neboka revadzidzi vepakoreji vadiki vanoda indasitiri yerunako. Ivo vane hunyanzvi muChirungu, Spanish, ChiGerman, ChiFrench, uye chiArabic, uye vanopa panguva yakakodzera uye yakajeka indasitiri ruzivo, sumo yechigadzirwa, uye mashandiro kune vatengi kutenderera pasirese. Nhungamiro, mushure-kutengesa kushandurwa uye rimwe basa repamhepo rekutsigira.
Isu tiri vekutanga tekinoroji kana zvasvika kune:
>> IPL Bvudzi Kubvisa muchina
>> 808nm diode laser bvudzi kubvisa muchina
>> Cryolipolysis inotonhora inotetepa muchina
>> IPL Laser RF Multifunction michina
>> CO2 Laser runako michina
>> Akatungamirira PDT ganda rejuvenation
>> IPL YAG laser Spare chikamu
>> Nd: Yag Laser Tattoo Kubvisa Muchina
>> Kumba Shandisa Mini Runako Machine
>> Chiso chinosimudza Ganda Rejuvenation muchina
>> Mazino machena
>> Laser Bvudzi Regrowth
tinoita kuti vanhu vave vakanaka .wonderful .comforable.
"Zohonice Runako Equipment Co.LTD" inofanirwa kucherechedzwa nesalon, spa, kiriniki uye Varidzi vePratic seVari Kutungamira mufashoni paRakanaka kumisikidzwa uye Gadzira inoshamisa highlife maitiro ..
Yakavimbika bhenefiti inokwanisika Passionate, Inovandudza, Inoremekedza, Inotsigira Yekutengesa, Inonakidza.